5 सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक तातो पानीका मुहानहरू मा युरोप | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा इटाली >5सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक तातो पानीका मुहानहरू मा युरोप
समुद्रहरू, नदी, र पोखरी छैन केवल सुन्दर प्राकृतिक चमत्कार हो कि लायक योजना एक छुट्टी वरिपरि. हामी हाम्रो नामकरण5सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक तातो पानीका मुहानहरू मा युरोप त्यो भन्दा बढी छन् एक यात्रा लायक मदत संग बचत रेल रेल टिकट.
5 युरोप मा सर्वश्रेष्ठ हट स्प्रिंग 1: Aix लेस Bains Riviera को आल्प्स, फ्रान्स
Aix लेस Bains, आल्प्सको रिभिएरा थर्मल शहर हो, को अविश्वसनीय विदेशी र व्यापक लेक Bourget मा berthed. यो एक हो5सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक तातो पानीका मुहानहरू मा युरोप र छ found deep in the Savoie french area, यसको आल्प्स massif छिमेकीका लागि प्रसिद्ध. शुद्ध पानी उपस्थिति, धेरै खनिज सद्गुण संग, सबै शहर वरिपरि, यो थर्मल परम्पराअनुसार यसलाई स्वाभाविक नेतृत्व. यो जादुई स्थान साँच्चै तपाईं दिन्छ सबै भन्दा राम्रो प्रकृति को लागि आफ्नो राम्रो हुनुको. मा Aix लेस Bains Riviera des Alpes, प्राकृतिक चिकित्सा र brimstone धनी पानी संयोजन प्रदान गर्न एक साँचो पुनर्जनन.
जेनेभा गर्न Aix लेस Bains Le Revard गाडिहरु
लजेन गर्न Aix लेस Bains Le Revard गाडिहरु
पेरिस Aix लेस Bains Le Revard गाडिहरु
बर्न गर्न Aix लेस Bains Le Revard गाडिहरु
2: Terme di Saturnia - टस्क्यानी, इटाली
प्राप्त गर्न सजिलो छ. त्यहाँ देखि बस कहीं बारेमा संग युरोप मा मदत बचत तालिम, टस्क्यानी दावा सबैभन्दा सुखद जीवन तातो पानीका मुहानहरू मा विश्व. त्यसैले, कुनै आश्चर्य यो छ हाम्रो सूची5युरोप मा सर्वश्रेष्ठ हट स्प्रिंग! संग 500 चिकित्सकीय पानी लिटर एक ज्वालामुखी ज्वालामुखीको मुख बाहिर पम्प्ड भइरहेको प्रत्येक दोस्रो, यो वसन्त पानी पूर्ण शुद्ध छ. को लागि धन्यवाद 99.5 डिग्री फा पानी र सुन्दर इटालियन आसपास परिदृश्य यो, त्यहाँ कुनै शंका छ. तपाईं मा पर्ची हुनेछ, एक गहिरो छूट को राज्य यो वसन्त.
यो थर्मल स्पा संसारमा कुनै बराबर कहीं छ दाबी. घमण्ड छ कि पानी स्वाभाविक शक्तिशाली, शुद्ध र खनिज लवण मा धनी. एक उपहार को प्रकृति जो भर्नुहुन्छ स्पा पूल रूपमा यो बग्छ देखि, एक वसन्त फिर्ता डेटिङ हजारौं वर्ष. Why not try it out for yourself?
5 युरोप मा सर्वश्रेष्ठ हट स्प्रिंग 3: एक्वा डोम - Tyrol, अस्ट्रिया
16 औं शताब्दीमा देखि, मान्छे आफ्नो तातो पानीको पोखरी को निको गुण लाभ उठाउन Tyrol भ्रमण गरिएको छ. अब तपाईं विशाल स्नान र थर्मल पूल भरिएको आनन्द उठाउन सक्छौं 90 डिग्री F 97 डिग्री फा न्यानो थर्मल पानी. के यो वसन्त अद्वितीय बनाउँछ यसको levitating थर्मल पानी कटोरे छ, रोशनी भरिएको, मसाज बेंच, र whirlpools.
यो आँखा पक्रने वास्तुकला को मूल स्पा हल वरपर प्रकृति को सुन्दरता दर्पण. काठ, पत्थर, प्रकाश र – को पाठ्यक्रम – पानी को भाग हो शानदार दृश्यहरु. को कुल 12 भित्री र बाहिरी पूल पौडी खेल्न र आफैलाई तर्कन गरौं गर्न आमन्त्रित. इन्डोर पूल छन् जोडिएको तीन हडताली बाहिरी पूल stilts मा जलमार्ग माध्यम.
4: Thermae स्नान स्पा - स्नान, इङ्गल्याण्ड
युरोप मा हट स्प्रिंग आराम छन् र ऐतिहासिक? यो आवाज जस्तै राम्रो तरिका टिकटिक केही बाल्टिन सूची आइटम मा एक जाने. स्नान को शहर को दिल मा, तपाईं पाउनुहुनेछ Thermae स्नान स्पा. एक पुरस्कार विजेता प्राकृतिक स्पा गर्न सक्छन् जहाँ तपाईं अब नुहाउने बेलायत मा मात्र स्वाभाविक न्यानो, खनिज धनी पानी. को Celts र रोमी भन्दा गरे जस्तै 2,000 धेरै अगाडी. यसलाई, तथापि, हुन जारी गर्न घर बेलायत मात्र प्राकृतिक थर्मल पानी. अन्तिम विश्राम अनुभव प्राप्त. भ्रमण यो विजेता पुरस्कार दिन स्पा धनी खनिज पानी मा छोयो 92 डिग्री फा र ध्यान डिजाइन स्पा उपचार.
5 युरोप मा सर्वश्रेष्ठ हट स्प्रिंग 5: Gellert स्नान, हंगेरी
हामी मुक्ति छन् सबै भन्दा राम्रो लागि अन्तिम मा हाम्रो पुस्तकहरू. तपाईं रोयल्टी जस्तै महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने, अझै पनि केही घण्टा, you should definitely यात्रा Gellert स्नान मा हंगेरी राजधानी, बुडापेस्ट. यसको embellished संरचना तपाईं पाउनुहुनेछ ठूलो न्यानो स्नान लाइनहरु संग रोमन स्तम्भ. यी पानीहरूमा उपचारका लागि लाभदायक बिभिन्न घटकहरू छन् गठिया र अन्य आर्थोपेडिक समस्याहरू. Gellert स्नान खुलेको 1918 एउटै गहिरो भूमिगत पानीका मुहानहरू 12 औं शताब्दीमा प्रयोग सेन्ट जन को Knights प्रयोग औषधीय पानी उपचार भेटी, र पछि तुर्क खनिज धनी पानी को invigorating शक्तिहरु महसुस गर्न.
यसको सबै भन्दा अद्वितीय मा विश्राम अनुभव गर्न तयार? त्यसपछि जानुहोस् एक ट्रेन सेव र हाम्रो छानिने कुनै पनि एक एक रेल टिकट बुक5युरोप मा सबै भन्दा राम्रो तातो पानीका मुहानहरू.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक तातो पानीका मुहानहरू मा युरोप” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hot-springs-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ /यो /वा tr /डे र अधिक भाषा.
किन तपाईं युरोप मा यात्रा गर्नुपर्छ वसन्त मा
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्पेन, यात्रा युरोप
बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा: 10 तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी कुराहरु
ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप